Wafdiga Uu Hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga Oo Ankara Kula Kulmay Ardayda Soomaaliyeed Ee Turkiga Wax Ku Baraneysa Qaarkood “DAAWO SAWIRRADA” | Radio Muqdisho
Wafdiga Uu Hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga Oo Ankara Kula Kulmay Ardayda Soomaaliyeed Ee Turkiga Wax Ku Baraneysa Qaarkood “DAAWO SAWIRRADA”
Published on January 20, 2013 by admin · 7 Comments · 7,842 views
Wafdiga ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya ee socdaalka shaqo ku jooga dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga ayaa magaalada Ankara kula kulmay qaar ka mid ah Ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi wax ku baraneysa.
Wafdigan oo uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga Dalka Madane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa kulanka ay caawa la qaateen Ardayda Soomaaliyeed oo iyagu isaga kala yimid magaalooyinka Istanbul iyo Ankara waxaa soo qaban qaabisay Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Turkiga.
Ugu horeyn Safiirka Soomaaliya ee Dalka Turkiga Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo kulanka khudbad ka jeediyey ayaa wafdiga waxa uu warbixin ka siiyey xaaladda ay nolol ahaan iyo waxbarasho ahaanba ku sugan yihiin Ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi deeqaha waxbarasho ka helay waxaana uu safiirku xusay in Safaaradda ay mar walba la socoto xaalada Ardayda oo ay ka warqabto.
Markaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah Ardayda oo iyagu faah faahin ka siiyey Wafdiga Dowladda ka socda xaaladooda waxbarasho iyo mida noloshooda waxaana ay dhanka kale Ardaydu goobta kusoo bandhigeen aqoon isweydaarsi ay ku muujinayaan heerkooda aqooneed ayadoo aqoon is weydaarsigaasina ay Ardayda qaarkood hadiyado isku gudoon siiyeen.
Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda,iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah Mudane Jamaal Baroow oo isaguna kulanka khudbad ka jeediyey ayaa tilmaamay inuu aad ugu farax sanyahay halka ay mareyso waxbarashada Ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga ku sugan waxaana uu Ardayda ku dhiirageliyey iney u istaagaan sidii ay waxey bartaan ugu faa’ideyn lahaayeen dalkooda iyo dadkooda marka ay qalin jebiyaan kadib.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo isagu gebagebadii kulanka khudbad dheer ka jeediyey ayaa ugu horeyn waxa uu ardayda faah faahin ka siiyey isbedellada hormarineed ee dalka ka jira gaar ahaanna dhinacyada amniga,siyaasadda iyo dib u dhiska waxaana uu wasiirku xusay iney jiraan guullo aad u ballaaran oo dhinacyadaasi laga gaaray.
Wasiirka Difaaca oo sii wata hadalkiisa ku aadan isbedellada dalka ka jira ayaa xusay in dalka xiligan uu si aad ah u dhismayo waxaana uu Ardayda kula kaftamay in hadii ay dib ugusoo laabtaan goobihii markii hore laga kaxeeyey qaarkood laga yaabo iney garan waayaan guryahoodii,ardaydana wuxuu ku booriyey ineysan marnaba ka tagin dhaqankooda.
Ugu dambeyntii Wasiirka Gaashaandhigga Dalka Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa si aad u ammaanay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga oo uu ku tilmaamay iney tahay safaaradda safaaradaha hogaamisa marka loo fiiriyo buu yiri sida ay isugu xerto islamarkaana ay u wada shaqeeyaan Ardayda,mas’uuliyiinta Dowladda iyo bulsha weynta Soomaaliyeed ee ku nool dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga taasi oo muujineysa sida ay Safaaradda waajibaadkeeda u gudaneyso.
laasqoray boy says:	January 20, 2013 at 5:07 am	wasiir fiqi waa mujaahid la hubo alshabaab magiciisa waa ka baqaan xataa hadaay maqlaan
Reply »	HIIS says:	January 20, 2013 at 7:57 am	MASHA,ALLAAH FARXADAAN NA MA NOO DHIMANEED AILAAHOW ADAA KU MAHADSAN
Reply »	deeqo says:	January 20, 2013 at 12:09 pm	somaliya hanoolaatan leeyahay wlh sawiradaan aadan ugu farxay mxaa yeelay waxan arkayaa oo aan aad ugu faraxsanahay wasiir soomaaliyeed oogarbihiisa ay buuxiyeen madaxdii barito,ayagoo wali wada faraxsan dhamantood,sidoo kale dardarankii ahaa haka tagina dhaqankiina.waxan leyahay dowladnimo jir dowladnimo joog
Reply »	axmed says:	January 20, 2013 at 2:19 pm	maashaa alaah meeshaan waxaa inooga soo baxaayo wax weey oo aan cidina somaliya u qaban marka laga reebo dowladah sudan, yaman iyo maleysiyo kuwaaso horay ugu deeqay ardada somaliyeed wax barasho bilaash ah mida kale aan raacin lahaa ayaa ah in ardaydaan aana labarin wax barasho kaliya ee la baro wadaniyada ka dhaqanto qabyaalada waa in ay soo laabtaa iyagoo tacliin leh wadniyiin ah ruuxdooduna ay dhisan tahay turkiya ha noolaato ayaan dhahayaa maashaa alaah
Reply »	Ahmed naaleeye says:	January 20, 2013 at 11:17 pm	masha allah
isdhexgalka ardaydda iyo wasiirka
Reply »	wadani114 says:	January 21, 2013 at 1:45 am	maashaa allaah dalkeena iftiin baa soo baxay ee allaha usii kordhiyo…
Reply »	Dahir Mohamed says:	January 23, 2013 at 11:21 am	Mashaa allah, waa guul iyo farxad u soo hoyatay dhammaan umada soomaaliyeed..allahu akbar, allaahu akbar, allahu akbar………